HRW: Waa la kufsadaa barakacayaasha - BBC Somali - Warar
HRW: Waa la kufsadaa barakacayaasha
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 27 Maarso, 2013, 02:04 GMT 05:04 SGA
Hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch, ayaa sheegtay in dadka barakacayaasha ah ee ku nool dalka Soomaaliya ay lagula kaco gafaf la xiriira kufsi iyo qaabab kale oo xadgudubyo ah oo ay gaystaan kooxo hubaysan oo ay ku jiraan ciidamada dowladda.
Human Rights Watch ayaa sheegtay in dumarka ka carara gaajada iyo khilaafaadka ee ku nool xeryaha caasimadda Muqdisho ku yaalla, ay sharaxaad ka bixiyeen kufsi wadajireed ay gasteen rag xiran labiska ciidamada iyo xubno ka tirsan maleeshiyooyinka.
Kooxda ayaa sheegtay in maamulayaasha xeryaha, oo inta badan xiriir la leh ragga hubaysan ay weecsadaan cuntada iyo gargaarka kale. Maamulka xeryaha ayaa noqday mid lacag badan lagu lunsado, ayay sheegtay warbixintan, oo tilmaantay in maamulayaasha ay ka hor istaagaan dadka ku jira xeryaha in ay ka baxaan halkaas.
Human Rights Watch waxay sheegtay in inkastoo dowladda cusub ee Soomaaliya tan iyo markii ay xukunka la wareegtay ay soo saartay warar aad u wanaagsan balse ay aad u yar tahay isbadalka dhinaca dhulka ka dhacay.